The akasununguka paIndaneti basa. Kukarukureta muhombe hukuru Manera 180 madhigirii
Kukarukureta pezvikwiriso ane kutenderera 180 madhigirii
Matanho kuderedza tambo P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
P - kuwanda kwenhambwe kuderedza kutevedzana
Kukarukureta pezvikwiriso ane kutenderera 180° ane furati papuratifomu
Chero kure pakati manera matanho anofanira kuva akaenzana.
Panyaya iyi, iyo kumhara inogona sechinhu rimwe danho.
Pinda kukwirira kubva pasi pauriri kusvikira pasi pamwero pauriri wechipiri.
Kutaridzwa kureba hwomukova - chinhambwe kuti achatora manera yenyu.
Miganhu zvinogona raanotaura metres, millimeters uye masendimita.
Nokuti kusarudzwa pakati Zvakanyanya Kunaka Panguva zvimunakire masitepisi kushandura kuwanda kwenhambwe, uye chirongwa kuchaita ngaateme vanorumbidza yawo usability.
Paiva kusarudza - kuti vaunze-dema-uye chena kana mavara mufanidzo.